Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Barbados » Ny Mpanjakavavy dia nosoloina filoha vaovao voalohany
Vaovao Mafana Barbados • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
LONDON, ANGLETERA - 23 MARTSA: Dame Sandra Mason, governora jeneralin'i Barbados, taorian'ny nanaovana azy ho Dame Grand Cross of the Order of St Michael sy St. , Angletera. (Sarin'i John Stillwell - WPA Pool/Getty Images)
Ny parlemanta Barbados dia nifidy tamin'ny volana lasa teo hanolo ny Mpanjakavavy Elizabeth II amin'ny governora jeneraly ankehitriny Sandra Mason ho filohany voalohany, mamela ny firenena handalo ny tantarany amin'ny maha zanatany tranainy indrindra an'ny Fanjakana Britanika.
Mason no hanao fianianana ho filoha voalohan'ny Barbados amin'ny misasakalina anio alina, manala ny mpanjaka britanika tsy ho lohan'ny fanjakana taorian'ny taonjato 4.
Efa ho 400 taona lasa izay ny mpanjaka, na dia nahazo ny fahaleovantenany tamin'ny UK tamin'ny taona 1966 aza ny nosy. Barbados repoblika iray, nanambara fa “Mitady filoham-panjakana Barbadiana ny Barbadiana”.
Paradisa fizahan-tany sy kolontsaina i Barbados, ary azo antoka fa hivoaka ho dingana manan-danja eo amin'ny tantara ho an'ny indostrian'ny fizahantany sy ny fizahantany izany fiovana izany.
“Rehefa nahazo ny fahaleovantena efa ho antsasaka taona lasa izay, ny firenentsika dia tsy isalasalana ny amin'ny fahafahany mitantana tena. Tonga ny fotoana hialana tanteraka amin'ny fanjanahantany, ”hoy i Mason tamin'ny volana septambra, ho fiarovana ny fampielezan-kevitra.
The Prince of Wales, izay mpandova ny Mpanjakavavy, dia tonga teto amin'ny nosy ho amin'ny lanonana fianianana tao amin'ny Kianjan'ny Mahery Fo ao an-drenivohitra Bridgetown.
Ny Mpanjakavavy dia hanolotra amin'ny fomba ofisialy ny toerany amin'ny misasak'alina, 30 Novambra hanamarihana ny faha-55 taonan'ny Barbados' fahaleovantena, izay horaisin'ny Printsy Charles amin'ny fomba ofisialy amin'ny vanim-potoana vaovao.
Na dia teo aza ny fanapahan-kevitry ny nosy hanilika ny Mpanjakavavy, dia naneho ny fanantenana ny Printsin'i Pays de Galles fa hihazona fifandraisana matanjaka i Angletera sy Barbados, ary manantitrantitra ny “fifandraisana an-tapitrisany” eo amin'ny firenena roa tonta.
Barbados no firenena Karaiba farany lasa repoblika, nanatevin-daharana an'i Dominika, Guyana ary Trinidad sy Tobago. Raha mbola tsy nihetsika tamin'ny fomba ofisialy hanendry filoha i Jamaika, dia nanambara ny praiminisitra Andrew Holness fa vonona ny hanolo ny Mpanjakavavy ho filohan'ny fanjakana.
شات العراق hoy:
November 30, 2021 amin'ny 01: 49